Ity ny fampiharana DJI Assistant 2 ho an'ny Mac sy ny drone DJI | Avy amin'ny mac aho
Ity ny fampiharana DJI Assistant 2 ho an'ny Mac sy ny drone DJI anao
Ny iray amin'ireo zavatra voalohany tokony ho vonona rehefa mividy drone marika DJI dia ny fangatahana ho an'ny Mac DJI Assistant 2. Izy io dia fampiharana izay naseho efa-taona lasa izay niaraka tamin'ny drôna voalohany an'ny marika, fa izao kosa dia tena ilaina amin'ny fiasan'izy ireo.
Vao tsy ela akory izay dia nividy drone DJI Magic Pro aho, drone izay tsy nijanona nahagaga ahy ary amin'ny habeny voafehy sy azo fehezina no nahavitan'izy ireo namorona zava-mahatalanjona izay tsy mitsahatra mioty fahombiazana.
Iray amin'ireo toetra mampiavaka ny kintana amin'ny kintana Marika DJI dia ny mitranga toa ny vokatra Apple, izany hoe afaka manatsara ny fotoana izy ireo rehefa manova ny firmware sy ny rindrambaiko ny marika. Noho io antony io dia ilaina ny fahatongavan'ilay rindranasa izay afaka mampifanindrahindra ny fitaovana amin'ny solosaina.
Nanomboka tamin'ny fampiharana Windows daholo izy io, saingy tsy ela dia ela vao nahatsapa i DJI fa amin'ny alàlan'ny fitaovana Apple dia kely kokoa no nianjera ny rindranasa ary nohavaozina tsy misy olana lehibe ny fitaovana Izany no antony namoronany ny DJI Assistant 2 ho an'ny Windows sy Mac.
Araka ny nolazaiko anao tany am-piandohana, rehefa mividy drone marika DJI ianao dia mila mametraka ilay rindranasa tiako haseho anao anio mba hanavaozana ny rindrambaiko sy ny rindrambaiko. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy ampidininao ilay rindranasa ary noho izany dia mila mankany amin'ny pejy DJI ianao, safidio ny maodelin'ny drone anao ary avy eo mandehana any amin'ny ampahan'ny fisintomana ny tranokalan'ny drone.
Azonao atao ny misintona ny DJI Assistant 2 amin'ny pejy maromaro miankina amin'ny maodelin'ny drone anananao, ka raha miditra amin'ny drone Magic Pro ianao dia hahita ilay fampiharana mitovy amin'ny miditra amin'ny tranokala Phantom 4 PRO. Ny fangatahana fitantanana dia mitovy ary inona tena fanovana dia ny firmware ny fitaovana.
Vantany vao tafapetraka ny rindranasa, dia tsy maintsy jerenao ny rindrambaiko mandrafitra ireo fitaovana mamorona drone ary izany, ohatra, ao amin'ny Magic Pro dia mila manavao ny fanaraha-maso ny onjam-peo, ny bateria ary ny drone ianao. Izy io dia dingana iray izay tsy maintsy atao imbetsaka isan-taona ary ny DJI dia tsy mijanona amin'ny famoahana vaovao ho an'ny drôna.
Raha vantany vao tafapetraka ny fampiharana dia tsy maintsy ampifandraisinao amin'ny Mac ny fifehezana na ny drone amin'ny alàlan'ny tariby UBS ary amin'izay dia sokafy ny fampiharana ary alefa ny drone na mpanara-maso, arakaraka izay havaozinao. Amin'izay fotoana izay ao amin'ny fikandrana DJI Assistant 2 dia miseho ny kisary volondavenona miaraka amin'ny anaran'ilay natsofokao. Mijanona ho anao fotsiny ny manindry ny mitovy ary manamarina ny rafitra raha misy firmware vaovao hanohizana ny fisintomana sy ny fanavaozana.
Ampidino | DJI Assistant 2
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ity ny fampiharana DJI Assistant 2 ho an'ny Mac sy ny drone DJI anao
Lahatsoratra iray hafa izay lohateny fotsiny. Voaroba sy ratsy.
Ny mailakao dia milaza azy rehetra ... miandry foana zavatra izay tsy fantatrao hoe inona izany. Ho antsika izay manana drone DJI dia fantatsika tsara izay hazavaiko ao amin'ilay lahatsoratra. Misaotra niandry. Fiarahabana sy fisaorana noho ny fandraisana anjara mahafinaritra. Hianatra avy aminy isika rehetra.
Ny fiantohana orinasa ho an'ny Mac novidiana tany Aostralia na New Zealand dia 3 taona
Mpanamboatra sensor Finisar dia mahazo fampiasam-bola matanjaka avy amin'ny Apple